ArcGIS - Ny boky misy sary - Geofumadas
Fampianarana CAD / GIS
ArcGIS - Ny boky sary
Jiona, 2017 ArcGIS-ESRI, Fampianarana CAD / GIS, Featured, jeospatial - GIS
Ity dia antontan-taratasy manankarena izay misy amin'ny Espaniôla, miaraka amin'ny atiny tena sarobidy, ara-tantara sy ara-teknika, momba ny fitantanana sary amin'ny fifehezana mifandraika amin'ny siansa eto an-tany sy ny rafi-panazavana ara-jeografika. ny ankamaroan'ny atiny dia misy rohy mankany amin'ireo pejy misy atiny ifandraisana.
Ny tanjon'ity boky ity dia ny hampisehoana ireo matihanina GIS, mpamorona rindrambaiko, mpamorona tranonkala, na karazana teknolojia hafa rehetra, ny fomba hahatongavana ho sary sy Ace GIS. Na, apetraho amin'ny fomba hafa, ny fomba hahatongavanao ho olona mahay kokoa, mahay sy mahomby kokoa amin'ny fampiasana angona sary ao anaty GIS. Tampoka teo dia nanjary zava-dehibe tokoa ny sary ary ireo izay mahay mikaroka azy ireo, mamakafaka azy ireo ary mahatakatra ny tena dikan'izy ireo dia ho matihanina amin'ny fangatahana be mandritra ny taona maro.
Maromaro ny mety ho mpijery an'ity boky ity. Ny voalohany dia ny vondrom-piarahamonina GIS sy ny sarintany izay matihanina, ireo olona miasa miaraka amin'ny sari-tany sy ny angona geospatial isan'andro, indrindra ireo izay maniry ny hivoaka bebe kokoa amin'ny sary ao amin'ny fampiharana GIS. Raha mpahay siansa momba ny angona ianao, mpaka sary, mpiasan'ny masoivohon'ny governemanta, mpikasa an-tanàn-dehibe, na matihanina GIS hafa, dia mety efa mampiasa Internet sy manome vaovao ara-jeografika ho an'ny besinimaro ianao.
Angamba efa fantatrao tamim-pahalotoana ny lanjan'ny sary ho toy ny haitao mahatalanjona tahirin-kevitra izay mifamatotra tsara amin'ireo angona nentim-paharazana geospatial vector.
Ny mpijery iray hafa dia misy ireo mpampiasa GIS vaovao izay te hahalala izay azo atao amin'ny sary: ​​ny olona toy ny mpanamory fiaramanidina drone fialamboly manao iraka sidina hametrahana sarintany amin'ireo campus campus, ireo planista an-tanàn-dehibe izay mikasa ny hanangana tetik'asa fananganana indray, na ireo mpahay siansa sy bilaogera. izany tatitra momba ny fiovan'ny toetrandro izany ary tonga tao amin'ny GIS noho ny fahalianan'izy ireo amin'ny sary.
Ary farany, ity boky ity dia hahaliana an'ireo olona mankafy mijery an'izao tontolo izao sy mahita sary mahavariana eto an-tany. Ho an'ireo mpahay jeografia "seza lava" sy olon-kafa, ity boky ity sy ny dikanteny elektronika, azo jerena ao amin'ny TheArcGISImageryBook.com, dia manolotra karazana sary manintona ary amin'ny tranga sasany manelingelina, ary koa rohy mankany amin'ireo rindrambaiko misy sary sy sarintany matanjaka izay mitantara tantara mahaliana momba ny planetantsika izy ireo. Ny hany takiana mba hankafizana an'ity boky ity dia ny te hahalala an'izao tontolo izao bebe kokoa amin'ny alàlan'ny sary sy sary an-tsary ary hanana toetra tsara hiasa.
Mianara amin'ny fanaovana izany
Ity boky ity, ankoatry ny vakiana, dia misy ampahany azo ampiharina izay solosaina manokana ihany no ilaina
miaraka amin'ny fidirana tranonkala. Manomboka ny traikefa nahafinaritra rehefa tafiditra amin'ny fizotrany ny rohy,
mijery ny sarintany sy ny rindranasa noforonin'ireo mpampiasa hafa, ary mamita ny lesona hamoronana anao
sarintany sy rindranasa manokana. Ireto loharanom-pahalalana ireto (sarintany 200, fampiharana, horonan-tsary ary sary mihoatra ny XNUMX)
manana hyperlink ao amin'ny TheArcGISImageryBook.com izy ireo.
Ity boky ity dia momba ny fampiharana sary amin'ny ArcGIS, sehatra web GIS, ary izy no faharoa ao amin'ny
Andian-dahatsoratra Big Idea. Raha vao manomboka amin'ny GIS ianao, dia mety hanampy ny famakiana ny boky voalohany amin'ilay andiany, The ArcGIS Book: 10 Hevitra lehibe hampiharana ny jeografia amin'ny tontolo manodidina antsika. Na dia natao ho asa irery aza ity boky ity dia maro ny mpamaky no hahita ilay boky tany am-boalohany ho mahaliana ihany koa.
Previous Post«Previous Hanao ahoana ny fitantanana ny tany amin'ny ho avy? - fahitana an'ny Cadastre 2034
Next Post Ampitahao fiovana izay nitranga toy ny CAD rakitramanaraka »